Ungaita Sei Kuti Uwedzere Kudanana Newaunofambidzana Naye: 6 Hapana Bullsh * t Matipi! - Ukama
Rudo ndechimwe chinhu icho vanhu vazhinji vanotsvaga kubva kuhukama, asi zvinogona zvakare kunetsa kune vamwe.
Kunyangwe yakawandisa kana kuti isina kukwana, kuratidza uye kuda rudo kunogona kukonzera kukakavara mune kunyangwe hwakagadzikana hukama hwehukama.
Muchikamu chino, tichaongorora dzimwe dzenzira dzaunogona kuratidza nadzo rudo kune mumwe wako pamwe nekuzvigamuchira kubva kwavari.
Chii chinonzi rudo?
Kune chikamu chikuru, rudo kuratidza mumwe munhu waunoitira hanya kuburikidza nekubatana panyama, sekumbundirana, kubata maoko, uye kutsvoda.
Iyo inogona kutangira kubva kune mashoma madiki kusvika kune makuru ekuratidzira. Rudo rwakasiyana muhukama hwese, uye isu tese tine tarisiro dzakasiyana dzeizvo zvatinoda uye zvatiri kufara kupa.
Kunyangwe iwe uri munhu ane chivimbo mune zvakajairika, kuratidza rudo kunogona kunzwa sekukwakuka kukuru! Izvi zvakajairika, sezvo hukama hwese hwakasiyana.
Izvo iwe zvaungave wakasununguka kuita neshamwari dzepedyo (kukumbundira, semuenzaniso) unganzwa uchityisidzira neumwe wako mutsva.
6 Matipi Ekuratidza Kudanana Muhukama
Mumwe wako angangoda iwe kuti uvaratidze rudo rwakawanda uye ungatadza kunyatsogadzikana nazvo.
Zviudze iwe kuti izvi zvakanaka uye zvakajairika!
Haasi munhu wese anonzwa nenzira imwechete nezvekuratidza rudo, saka haufanire kunzwa uine mhosva kana chisiri chinhu chaunonyanya kuda kana kufarira.
Kurukura nemumwe wako pamusoro pekuti nei uchidzora kana kuti nei usiri kuda kuve nehukama navo nenzira iyi.
Tichaenda kuburikidza nemamwe matipi ayo achakubatsira imi mose kuwana chiyero cherudo chaunofara nacho.
Zviyeuchidze pachako kuti rudo nderwe kuratidza rudo uye hanya - chinhu chinofanira kunakidzwa uye kukosheswa, kwete chimwe chinhu chinofanira kukonzera kushushikana kwakawanda.
Imi mose muchawana nzvimbo yamuri kugarisana nayo maererano nekupa uye kugamuchira rudo, zvinongotora nguva.
1. Remekedza miganhu - zvese zvako nezvazvo.
Paunenge uchiyedza matanho matsva erudo nemumwe wako, kunyangwe iri hukama hutsva kana kuti mave mese kwekanguva, zvakakosha kuti uzive miganhu .
Chero chipi chinhu chinoita kuti iwe kana ivo vanzwe kusagadzikana chinofanira kuve kubatwa neruremekedzo , zvinoreva kusasundidzirana kana kuita kuti zvinhu zvinzwe sekutyisidzira.
Zvisinei hazvo iwe ungade mumwe wako kukuratidza rudo rwakawanda, haugone kuvaita kuti vanzwe sekuti vanofanirwa kuzviita 'kana zvimwe…'
Chidakadaka hachisi chipika chekutaurirana kana chinodikanwa chaunoita kubva kune mumwe munhu, iko kuratidza kwepedyo kwerudo uye hanya.
Iwo akadzika mazinga erudo anouya kubva mukuziva chaizvo mumwe munhu. Izvi zvinoreva kunzwisisa kwavo kwekare uye nekuziva nezve chero kushungurudzika kana kurwadziwa kwavakave vakasangana nakare vadikani kana vanhu vamwe.
Edza kuyeuka kuti izvi zvinhu zvinotora nguva kune vamwe vanhu, uye kuti haugone kumhanyisa kupora kweumwe munhu.
Kana mumwe wako achibatirira kumashure nekuda kwezvikonzero izvi, zviyeuchidze kuti hazvisi zvega uye kuti maitiro ako haangachinje avo vasinawo kugadzirisa.
Nenzira imwecheteyo, haufanire kunzwa sekunge iwe unofanirwa kumanikidza iwe kupinda mune inodakadza hukama.
zvinonakidza chokwadi chekugovana nezvako kubasa
Kana iwe wakasangana nechimwe chinhu chinotyisa, iwe unofanirwa kuzvipa iwe imwe nguva usati wamhanyira pakuratidza rudo rwakawanda.
2. Ita nguva yekuva vaviri-nguva.
Ronga mazuva apo iwe unowedzera 'coupley' - kupinda mune iyi mhando yemanzwiro kunobatsira iwe kukudziridza yakanyanya kutarisisa uye yepamoyo pfungwa.
Rongai zvinhu zvakanaka zvekuita pamwechete zvinokubatsira kuti unzwe kugadzikana nemumwe nemumwe uyezve nekufara kuve padhuze nemumwe.
Kuronga zuva remanheru chinhu chinowanzo kupera kana isu tave muhukama, sekuratidza rudo. Kana iwe nemumwe wako mukaita sarudzo yekuziva kuve pamwe nekudyidzana, rudo rwunotevera.
Ita kuzvipira kune rimwe zuva husiku vhiki yega yega kana maviri, zvinoenderana nezvirongwa zvako.
Ita shuwa kuti imi mese munonzwisisa kuti ichi chinhu chinofanira kutorwa zvakanyanya - kana mumwe wenyu achifanira kukanzura, chinofanirwa kunge chiri chikonzero chakanaka kwazvo.
Chikamu chikuru chekuvhurira mumwe munhu kuvimba, uye rudzi urwu rwekuzvipira runobatsira imi mose kushanda kuvimba mumwe nemumwe , zvisinei nekuti mave nenguva yakareba sei muri pamwe chete.
Couple-nguva inogona kuve chero chaunofarira, chero bedzi chiri chinhu chamunonakidzwa nacho mese.
Mamwe misi ndeyekuita chimwe chinhu chinodikanwa nemumwe wako kunyangwe iwe usinganakidzwi nacho, nekuti iwe unoda kukuratidza hanya…
ndinofanira kumupa nguva yakadii kuti afunge zvinhu
ASI… izvi misi inoda kuve chinhu iwe zvese nakidzwa nekuita - zvakakosha chaizvo kuti imi mese munzwe kugadzikana nemumwe, sezvo muchinyanya kuvhurika uye mumwe wako achizoda kugamuchira rudo rwakawanda.
Tora nguva yekuronga idzi mhando dzemazuva. Usango enda wakananga kune nyore sarudzo senge chisvusvuro uye bhaisikopo (kunze kwekunge zviri izvo zvamunofarira chaizvo kuita).
Nekuita tsika yemazuva, imi mose muchave nenguva yekufara uye kutarisira kwavari.
Izvi zvinoreva kuti iwe unenge uine chaicho 'chiitiko' chemhando yekufamba uchienda, uye imi mose muchatanga kuzvitarisira nekugovana rudo rwakawanda kune mumwe nemumwe. Tichaenda mutsika nemagadzirirwo mune zvakadzama gare gare pa…
Zvekuita Nezve Hukama Husina Kushamwaridzana Uye Kubatana
17 Matanho Ekuti Ushoma Unonamatira Uye Anodiwa Muhukama
Unofanira Kuchinja Kune Mumwe Waunoda?
Maitiro Ekuita Mumwe Munhu Kunzwa Akakosha, Anokosha, Uye Anodiwa
3. Joke kutenderedza.
Kunyanya kutamba pamwe nemumwe kunobatsira iwe kuti ugare wakasununguka nekubata uye kuva padhuze.
Izvi zvinobatana kuvimba, zvakare - kana iwe uchigona kuvhura uye kupusa nemumwe munhu, iwe unovimba navo uye musimba rehukama hwako. Izvi zvinoreva kuti iwe nemumwe wako muchanzwa makasununguka pese pese, izvo zvinowanzo simbisa rudo rwakawanda kubva kwamuri mese.
Kunyange isu takataura nezvekutora zvinhu zvakakomba uye nekuzvipira, pane imwe nguva yekurega tichienda kunofara.
Nekuzvirega iwe uchinyatso zorora mukati memumwe, iyo mhepo ichareruka. Izvo zvinhu zvinonyanya kugadzikana uye zvine moyo wakareruka zviripo, zviri nyore kuti imi mese muve kuda kutambanudza ruoko uye mubate maoko kana kutamba muchitamba navo paruoko (zvishoma!).
Kupfava kugokora nekutsvinyira kunogona kunyatso simudza mamiriro zvakare, zvichiita kuti zvinhu zvinzwe kunge flirty kunyangwe mave muri pamwe chete kwemakore.
Kubatanidza mumwe wako nenzira iyi kukura kukuru kwavo uye - kunyanya kuvimba kwavanonzwa kuburikidza ne 'mibairo' yekuterera kwako, zvakanyanya mukana wekuzvipa vamwe rudo.
Izvi zvakare zvinokuita kuti unzwe wakakura - hausi kunyatso kubvunza rudo rwavo, saka zvinoita sekurumbidza kwete mhinduro kune zvaunoda.
Zviyeuchidze izvi! Izvo zvinokubatsira iwe kuti uwedzere kuva nechivimbo nguva inotevera iwe paunoda kuratidza mumwe wako rumwe rudo uye kutarisisa, uye kana iwe uchizoda izvo mukudzoka.
Ramba uchitamba uye ichatanga kuwedzera kuva tsika. Kuva wepedyo padyo nemumwe munhu kunogona kukubatsira kuti uenderane nemanzwiro avo uye nepfungwa.
Zvinhu zvakapusa sekutamba footsie pasi petafura yekudya kwemanheru zvinogona kuita mutsauko mukuru. Rudzi urwu rwechinhu rwakanyatsojeka, saka rwakakwana kana mumwe wako asingade kuratidzwa kweruzhinji kwerudo kana kunyara kana kunyara.
unoita sei kana musikana achikuda
Zvakare nekunyepedzera kune wese munhu, zvinotumira pachena meseji kune mumwe wako kuti uripo, navo, uye iwe unoda kuve padyo navo.
Zvekare, kuita izvi neimwe nzira yekuseka kunobatsira kubvisa kumanikidza uye vane mukana wekuzorora, kunakirwa uye kuda kukuratidza rudo.
4. Chiise mumashoko.
Chidakadaka hachifanirwe kuve chemuviri - kutaura kunoshanda chaizvo zvakanaka padivi pekubata nyoro nekubata maoko.
Kutaura nezve manzwiro auri kuita uye sei uchida mumwe wako zvakanyanya inzira chaiyo chaiyo yekusimbisa zvese zvauri kuita kuburikidza nekubatana panyama.
Nekuita izvi, unenge uri kupa mumwe wako chivimbo chekusimudzira. Kana mave muri pamwe kwenguva yakareba, imi mose (ndinovimba) munoziva kuti munodanana uye munokoshesa mumwe nemumwe, asi imi mose munoda kuyeuchidzwa nguva nenguva.
Ita shuwa kuti mumwe wako anoziva kuti iwe unavo sechikamu che sarudzo inoshanda - unoshingairira kushandisa nguva navo uye unonakidzwa nekuve pedyo navo.
Kuvaudza izvi uye kuvayeuchidza kuti iwe uchiri kukwezva kwavari kuchaita musiyano mukuru mumazinga erudo muhukama hwako.
Kunyanya kuzvivimba kwamunonzwa imi, mamuri pamwe neukama, zvinonyanya kuita kuti imi mose muratidze rudo nekupa kutarisisa.
5. Zvichengete zvinakidze nekugara uchienderana.
Takabata izvi zvisati zvaitika, asi ipfungwa yakakosha chaizvo inokosha kuyeuka…
Paunoramba uchienderera nezviito izvi, zvinhu zvinowedzera kugadzikana uye nekunzwa zvakajairika.
Gadzira mazwi kana mitsara yakabatana nezvimwe zviito, i.e. achiti 'ndinokuda' zvinogara zvichitungamira kumbundiro kana iwe ukaita simenti iyo tsika. Mumwe wako achatanga kutarisira, kutarisira, uye kuda kumbundira pavanokunzwa uchivaudza kuti unovada.
Vachatanga kubatanidza zvese izvi nemanzwiro anodziya, anofara uye zvinonzwa senge yakawanda yemaitiro akachengeteka.
Paunonyanya kuita izvi, ndipo pavanonyanya kusununguka vanozove newe uchivabata nekuvambundira. Ichasvika padanho uko hunhu uhwu hunotarisirwa, uyezve kune iyo nhanho kwaunoda.
Kana vachinge vajaira kuratidzwa rudo newe, ivo vanozoda yakawanda yacho! Iwe unogona kuti 'ndinokuda' uye mira - ivo vanenge vakagadzirira kumbundira, saka, kana iwe ukasakurumidza kupa imwe, ivo vanozoita kufamba kwekumbundira iwe.
Ivo vanozonzwa sekunge ivo vari kungoenda pamwe neyakajairika iyo imi mese makagadzira, asi ivo vanenge vachitoita kutora chinoshanda chinzvimbo kukuratidzira iwe rumwe rudo rwakawanda.
Kunyanya iwe uchivarega vauye kwauri, ivo vanonyanya kugadzikana ivo vanenge vachizviita uye ivo vanowanzoita kuti vazviite ivo vega.
Ita kuti zvive pachena kuti unozvida ivo pavanouya kwauri kutanga, kunyanya kana vasingambowanzoite izvozvi.
Vachafarira kuziva kuti vanoita kuti unzwe zvakanaka uye vanonzwa kufara kuzviita sezvo chatova chikamu chechengeteko, yakasimbiswa maitiro.
kupi iwe kwaungaenda kana iwe wakasuruvara
6. Kurukura uye kuva akatendeseka.
Usanyadzisa mumwe wako kana kuita kuti vanzwe vane mhosva, asi inzwa wakasununguka kuvaudza kuti uri kunzwa sei.
Zvinogona kunge iwe uchida rudo rwakawanda nekuti uri kunzwa usina kuchengeteka, kana kuti uri kuva nenguva yakaoma mune dzimwe nzvimbo dzehupenyu hwako.
Zvinogona kungoitika nekuda kwekuti iwe unoda kuratidza rudo rwako kune mumwe munhu uye uchida kuve nechokwadi kuti ivo vari kupindura uye kudzorera.
Iva wakavhurika kune mhinduro!
Hazvirevi kuti iwe unoudza mumwe wako zvaunoda, asi kuve nechokwadi kuti vari kunzwa kugadzikana zvakare.
Vabatsiri vako vanowanzoverenga zvisirizvo, saka ita shuwa kuti uri papeji imwechete nekutaura nezve zvinhu. Iyi nhanho yekutaura haidi kugara nekusingaperi, saka chero kusanzwisisika kwekutanga kwaungangosangana nako kunongova chinhu chechinguva.
Nokusanganisa ese matanho ari pamusoro, iwe unogona chaizvo kutanga kuita fambiro mberi maererano nekupa uye kugamuchira rwakawanda rudo muhukama hwako.
Hukama hwese ndezve kuvimba, kuvimbika, uye tsitsi, uye zvese zvatakapa apa zvinongedzera kumashure kune iwo akakosha madingindira.
Batsiranai kuti munzwe kusununguka uye nekuvimba mamuri pamwe nekubatana.
Rangarira kuve unozviziva iwe uye tarisa mukati nezvako zvaunoda uye nei uchizvida, pamwe nekuona chokwadi kuti mumwe wako anonzwisisa zviri kuitika.
Ita nguva yemumwe nemumwe munzira nyowani uye batanai zvizere, pasina zvinokanganisa kana kumanikidza - vanhu vaviri chete, murudo chose.
Paunonyanya kuita hunhu hwemhando iyi, ndipo paunonyanya kuvhurika, paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchiona.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi chekuita nehukama hwerudo newawakaroorana naye? Taura zvepamhepo kune hukama hukama kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kukubatsira kuti uone zvinhu. Simply.
zviratidzo anoda kurara newe
hunyanzvi hwekufunga bhizinesi rako wega
ndeupi musiyano uripo pakati pekuita rudo nekuita bonde
apo mumwe munhu anokuzvidza pamberi pevamwe